တရုတ်က ရေပေါ်တွင် မောင်းနှင်နိုင် သည့် လေယာဉ် ကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ - Top MM News
PEACHES THAT PROTECT AGA...
It is good to know if th...
IN THE TIGER INDUSTRY, B...
Is the QUALITY segmentat...
တရုတ်က ရေပေါ်တွင် မောင်းနှင်နိုင် သည့် လေယာဉ် ကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့
myintkyaw | July 26, 2020 | News | No Comments
ရေပေါ် တွင် မောင်းနှင်နိုင် သည့် လေယာဉ်ပျံ တစ်စီး ကို တရုတ်နိုင်ငံ က ရှန်ဒေါင်း ပြည်နယ် ၊ ချင်းဒေါင်း ကမ်းခြေ မြို့ အနီး ပင်လယ်ပြင် ၌ အောင်မြင် စွာ စမ်းသပ် မောင်းနှင်နိုင် ခဲ့ကြောင်း သိရ သည် ။AG600 လေယာဉ် ကို တရုတ် အစိုးရပိုင် AVIC လေယာဉ်ပျံ စက်ရုံ က ထုတ်လုပ် ခဲ့ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဒေသစံတော် ချိန် နံနက် (၁၀) နာရီ၊ (၁၈) မိနစ် တွင် ပင်လယ် ပြင်ပေါ် မောင်းနှင် ပြခဲ့ သည်။
ပင် လယ်ပြင်ပေါ် လျှောစီး မောင်းနှင်မှု မပြုလုပ် မီ ၃၁ မိနစ် ကြာ စမ်း သပ် ပျံသန်း ခဲ့သေး သည်။ Kunlong AG600 လေယာဉ် သည် ရေပေါ် စမ်းသပ် မောင်းနှင် သည့် အရပ် ဘက် သုံး လေယာဉ် များထဲ တွင် အရွယ် အစား အကြီးဆုံးဖြစ် ပြီး သဘာဝဘေး ဒုက္ခအန္တရာယ် အတွက် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ချိန် တွင် များ စွာ အ သုံးပြုနိုင် ရန် မျှော် လင့် ထား သည်။
လေယာဉ်မှာ အရှည် (၃၇)မီတာ ရှိပြီး ဘိုးရင်း (၇၃၇)အရွယ်အစား နီးပါးရှိကာ တောင်ပံနှစ် ဖက်ပေါင်း အရှည် မှာ ၃၈.၈ မီတာ ရှိကြောင်း သိရ သည် ။လေပြင်၊ ရေပြင် မောင်း ၎င်းလေယာဉ် သည် အလေး ချိန် ၅၃ ဒသမ ၅ တန် သယ်ဆောင်နိုင် ပြီး လေကြောင်း ခရီးအကွာ အဝေး (၄၅၀၀)ကီလိုမီတာ အထိ ပျံသန်းနိုင် သည်။
crd:The standard Time
ခုံနံပါတ်(၁၀) နဲ့ လို က် ပါ စီးနင်းလာခဲ့ပေမယ့် အိမ်မရောက်ပဲ ထူးဆ န်းစွာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အသက်(၂၀) အရွယ်ကောင်မလေး….
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကို သာတူညီမျှ ဆက်ဆံရန်လိုအပ်ဟု တရုတ်ကို ၈ျာမဏီဝန်ကြီးချုပ် မာကယ်သတိပေး
အိန္ဒိယမှာ ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုး လူတွေနဲ့ စမ်းသပ်ခွင့်ပြု
ရည်းစားက ပစ်သွားလို့ အဆိပ်သောက် သတ်သေသွား တဲ့ ဆရာဝန်မလေး(စာဖတ်မပျင်းပါနဲ့ ….ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ညီမလေး တို့ရေ)
PEACHES THAT PROTECT AGAINST THE DRUGS WE EAT TODAY
It is good to know if this is the case so that car buyers are not mistaken
IN THE TIGER INDUSTRY, BROKERS ARE PAID BROKERS TO HIRE FISHERMEN
Is the QUALITY segmentation by country selling IPHONEs?
Characteristics of people who areateacher in relationships
© 2020 Top MM News.